Online jobs In Nepal: के तपाई फ्रीमा मोबाइमा ब्यालेन्स पाउन चाहानुहुन्छ?
यो सुन्दा नै आश्चार्य लाग्ने, यो नयाँ ट्रीक तपाइहरूसँग सेयर गर्दैछु। साथीहरू एउटा एप छ, एमसेन्ट(Mcent) भन्ने . एन्ड्रोइड प्ल्याटफर्ममा उपलब्ध रहने यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुहोस्।
त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर, पासवर्ड हालेर रजिस्टर गर्नुहोस्। रजिस्टर भएपछि तपाइलाई4अङ्कको् कोड पठाउँछ एमसेन्ट(Mcent)ले। त्यो कोड राखेपछि अबतपाईको अकाउन्ट फ्री रिचार्ज कमाउन तयार भयो।
जब तपाई एप खोल्नुहुन्छ, सुरूमा रिवार्डस पेज पाउनुहुन्छ, त्यो पेज बयाँतिर स्क्रोलगरे एपस इन प्रोग्रेस पेज आउँछ र दायाँमा रिचार्ज पेज रहेको छ।
रिवार्डस पेज : यो पेजमा तपाईडाउनलोड गर्न मिल्ने एप्सहरू देखा पर्दछन्। साथै यसमा छेउमा मूल्य पनि हुन्छ, जून तपाईहरूले डाउनलोड गरे वापत् पाउनुहुनेछ। त्यो एप्लिकेसनलाई क्लि्क गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईलाई प्लेस्टोरमा लगिनेछ र इन्सटल गर्नुहोस् एप।
एप्स इन प्रोग्रेस: याे पेजमा तपाईले गर्नुभएको एपस्को सूची र तपाईले प्राप्त गर्नु भएको रकम नि देखिनेछ।
एमसेन्ट एप्लिकेशन आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गर्न याहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
Posted by Prem Kumar Shrestha at 12:14:00 AM
Labels: android, earn online from android phones, एन्ड्रोइड, एमसेन्ट(Mcent), फ्रीमा मोबाइमा ब्यालेन्स
के तपाई फ्रीमा मोबाइमा ब्यालेन्स पाउन चाहानुहुन्छ?...